बसन्त महर्जनको ‘बुद्ध विमर्श’ प्रकाशित | साहित्यपोस्ट
साहित्यपोस्ट	 प्रकाशित २९ जेष्ठ २०७९ १०:५९
काठमाडौं । लेखक बसन्त महर्जनद्वारा लिखित पुस्तक ‘बुद्ध विमर्श’ प्रकाशित भएको छ । लेखक महर्जन बुद्ध र बौद्ध धर्म–दर्शनसम्बन्धी अध्ययन–अनुसन्धान र लेखन कार्यमा सक्रिय छन् । महर्जनको यो एघारौं बौद्ध पुस्तक हो ।
लुम्बिनीमा जन्मेका गौतम बुद्धलाई मात्र बुझ्दा बौद्ध धर्म–दर्शन र परम्परा सबैबाट अनभिज्ञ हुने कुरा पुस्तकमा परेको छ । पुस्तकमा बुद्धको अर्थ, बुद्धका प्रकारहरु तथा गौतम बुद्धभन्दा अघि बुद्धत्व प्राप्त गरेका मानव बुद्धहरुको संक्षिप्त विवरण पनि प्रस्तुत गरिएको छ । यसरी नै महायानी बौद्ध समाजमा प्रचलित पञ्च ध्यानी बुद्धको पनि जानकारी पुस्तकमा दिइएको छ ।
गौतम बुद्धको दैनिक जीवनचर्या कस्तो थियो ? उनका गुरु को थिए अथवा थिएनन् ? कसरी बोधि लाभ गरी बुद्ध बने ? बुद्धसँग भिक्षु बन्ने पहिलो र अन्तिम व्यक्ति को थिए ? किन तिनीहरु पहिलो र अन्तिम बन्न पुगेको ? भन्ने प्रश्नहरुको जवाफ पुस्तकमा विवेचनासहित उल्लेख गरिएको छ ।
बुद्धसँग के कस्ता खुबीहरु थियो ? बुद्ध भनेकैं के हो ? भन्नेजस्ता महत्वपूर्ण प्रश्नहरुको जानकारी दिने क्रममा गौतम बुद्धका विविध आयामहरुबारे पाठकलाई जानकारी गराइएको छ । यसरी नै बुद्धसँगको जीवन यात्रामा साथ दिने अग्रणी नेपालीहरुको उल्लेख नेपाली समाजका लागि थप रोचक र छलफलको विषय हुने देखिन्छ ।
बौद्ध दर्शनसम्बन्धी बसन्त महर्जनको पुस्तक प्रकाशित
११ आश्विन २०७८ १३:३२
बुद्धत्व प्राप्तिका लागि गौतम बुद्धले गृहत्याग गरी श्रीमती यशोधरालाई विचल्ली बनाएको भन्ने गैर बौद्ध समाजमा प्रचलित कथनको खण्डन गर्दै पुस्तकमा परिवार तथा नातागोतासँग सरसल्लाहपछि मात्रै गृहत्याग गरेको र बुद्धत्व प्राप्तिपछि परिवारका अन्य सदस्यले जस्तै पछि श्रीमतीले पनि बुद्धको संघमा प्रवेश गरी भिक्षुणी जीवन विताएको जानकारी पनि पुस्तले दिएको छ ।
लेखक महर्जनका अनुसार बुुद्ध, शिक्षा र गलत बुुझाई गरी तीन खण्डमा विभाजित यस पुस्तकमा समाविष्ट सामग्रीहरु बुद्ध र बौद्ध धर्म–दर्शन बुुझ्नका लागि आधारभूत ज्ञान हो ।
पुुस्तक इन्साइट पब्लिकेशन प्रा.लि.बाट प्रकाशन भएको हो । १७६ पृष्ठको यस पुस्तकको मूल्य ३ सय पचार रुपैयाँ रहेको छ ।
बसन्त महर्जनबुद्ध विमर्श